नेपालको वार्ताको आग्रहलाई भारत महत्ववहीन ठान्छ, किन ? « Dainiki
११ आश्विन २०७७, आईतवार १०:०६
केही सञ्चारमाध्यमका समाचार हेरौँ । पहिलो– चीनले नेपाली भूिममा भवनहरू निर्माण ग¥यो । दोस्रो– त्यो भवन बनाएकै वरपरको सीमास्तम्भ नम्बर ११ हरायो । तेस्रो– सीमास्तम्भ ११ फेलाप¥यो । चौथो– ती भवन चीनकै भू–भागमा बनेका हुन् । चीनले सीमा मिचेको छैन ।
मिचेको हो भन्न कसैको पुष्टि नचाहिने तर मिचेको हैन भन्न आधिकारिक प्रमाण चाहिनेजस्तो देखियो । सीमाजस्तो संवेदनशील मुद्दामा हचुवाको पत्रकारिता नगरेको भए उचित हुन्थ्यो । कुनै सञ्चारमाध्यमले गलत समाचार दिएका हुन सक्छन् । अरूको सार्दा, नियत त्यस्तो नहुन सक्छ । कुनै सञ्चारमाध्यमले एउटा रणनीतिक उद्देश्यका साथ विवाद उठाएका हुन सक्छन् । पत्रकारिताको धर्म हो– सत्य–तथ्य सूचना प्रवाह गर्नुपर्छ । व्याख्या र विश्लेषण त विषयगत भइहाल्छन् ।
बिचरा, भारतीय सञ्चारमाध्यमले आफैँले प्रारम्भिक सूचना पाएजस्तो गरेर सीमा अतिक्रमणको प्रचार गरे पनि तिनका मूल स्रोत नेपाली सञ्चारमाध्यम नै हुन् ! कस्तो बेला चीनले सीमा मिचेका कथ्य प्रवाह र प्रसारण भइरहेका छन् भने, छ दशकदेखि भारतले अतिक्रमण गरेको भूगोल फिर्ताका लागि नेपालले ठोस पहल गरिरहेको छ । लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरासम्मको भू–भाग समेटेर नेपालले आफ्नो पूर्ण नक्सा जारी गरेपछि उत्तरतिरका सीमा बढी बहसमा तानिएका छन् ।
एक साताका घटनाक्रम यत्ति हुन् । नेपालले आफ्नो भू–भाग प्रमाणसहित फिर्ता दिन भारतसँग आग्रह गर्दा चीनले नेपाली भू–भाग मिचेका शृङ्खलाबद्ध समाचार किन र कसरी आइरहेका छन् भन्ने कोणलाई नकोट्याउँ । तर, सीमाजस्तो संवेदनशील विषयमा हचुवा विवरण दोहोरिनु र तिनलाई नेपाल–चीन सम्बन्धमाथि आक्रमण गर्ने आधार बनाउनु भने उचित हुँदैन । कार्यस्थल रोज्ने कर्मचारी राष्ट्रसेवक प्रमाणित हुनुपर्छ, कतैको हावामा पीपलपात हुने होइन ।
सञ्चारमाध्यममा त्यो सीमास्थलको विवरण आएपछि नेपाल सरकारले ती भवन चीनभित्रै बनाइएको प्रस्ट पा¥यो भने चिनियाँ दूतावासले पनि चीनभित्रै भवन बनाइएको बताउँदै, नभए अनुगमन गरी प्रमाणीकरण गर्न भन्यो । असोज ७ मा परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपाल–चीन सीमा रिपोर्ट शीर्षकमा आएका सञ्चार विवरणबारे भन्दै निकालेको वक्तव्यमा आधिकारिक तथ्य, सीमा नक्सा र संयुक्त स्थलगत अनुगमनलाई आधार मानी नापी विभागले ती भवन नेपाली भू–भागभित्र नरहेको जनाएको बतायो ।
चीनले नेपालसँग सीमामा नजिकबाट संवाद भइरहेको र नेपालको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको सम्मान गरेको स्मरणसमेत ग¥यो । एउटा यथार्थ हो, अहिलेसम्म नेपाल र चीनबीच सीमा विवाद छैन । सन् १९६० मा नै नेपाल र चीनबीच सीमा समाधानका सूत्रमा सहमति भएको हो । त्यसयता खासै विवाद छैन । नेपाल र भारतबीच पनि ९८ प्रतिशत सीमाको ‘स्ट्रीप म्याप’ तयार छ, सुस्ता र कालापानीबाहेक । लिम्पियाधुरासम्म भारतले फिर्ता गरे समाधान हुन्छ । सकारात्मक विकास भएको छ– नेपालले आफ्नो सीमारक्षा अभियान अघि बढाएको छ ।
नेपालले लिम्पियाधुरासम्मको नक्सा जारी गरेपछि दक्षिण छिमेकसँग सीमा संवाद भएको छैन तर कोरोनालगायतका संवाद उच्चतहमै जारी छन्, कोरोना सङ्क्रमणविरुद्ध नेपाललाई भारतले गरेको सहयोग प्रशंसनीय छ तर नेपालले भारतसँग पश्चिमोत्तर सीमा टुङ्गो लगाउन गरिरहेको औपचारिक आग्रह किन उसको प्राथमिकतामा परेको छैन ।
भारत मस्कोसम्म पुगेर चिनियाँ पक्षसँग पाँचबुँदे सहमति गर्छ, तनावका बीचमा पनि सीमामा चीन र भारतका सेना वार्ता गर्छन् । तर, नेपालको वार्ताको आग्रहलाई भारत महत्ववहीन ठान्छ, किन ? भारत चीनसँग वार्तामा आतुर हुन्छ तर नेपालसँग अनिच्छुक !
प्रधानमन्त्री केपी ओलीको अहिले सम्पूर्ण ध्यान नेपाल, क्षेत्रीय र विश्वकै शान्ति र विकासमा केन्द्रित छ । भारत र चीनलाई नेपालले विकासका लागि अनुकूलता ठानेको छ, प्रतिकूलता होइन । विकासमा साझेदारी, पारस्परिक लाभ र सम्मान यसका आधार हुन् । सीमालगायतका सबै विवाद प्रमाणका आधारमा वार्ताबाट समाधान गर्ने र साझा स्वार्थका लागि संयुक्त प्रयास गर्ने नीति नेपालको हो, छिमेकीको पनि त्यही हुनुपर्छ ।
(लेखक खनाल गोरखापत्रका सम्पादक सल्लाहकार हुनुहुन्छ ।)